Taariikhda Sheekh Cabdi Weli Sh. Cali Cilmi Yare - Caasimada Online
Home Warar Taariikhda Sheekh Cabdi Weli Sh. Cali Cilmi Yare
Taariikhda Sheekh Cabdi Weli Sh. Cali Cilmi Yare
Gaalkacyo (Caasimadda Online) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar isugu jiray qaraxyo iyo mid toos ah oo saaka waaberigii hore lagu qaaday xarun uu Koofurta magaalada Gaalkacyo ka degenaa Wadaad muran badan ka dhex dhaliyay bulshada, kaasoo lagu magacaabi jiray Sheekh C/weli Cali Cilmi Yare.
Haddaba dad badan ayaa is waydiinayo Taariikhda Shiikh Cabdiweli oo uu dhalay Shiikh Cali Cilmi Yare oo ahaa wadaad Diinta Islaamka si weyn ugu faafiyey Gobolka Mudug kaasoo Diinta Islaamka Caalim ku ahaa.
Halkaan hoose ka daawo Taariikhdiisa oo dhameystiran